कोरोनालाई जितिसकेकालाई अर्को प्राणघातक समस्या - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
भारतको मुम्बईस्थित आँखाका शल्यचिकित्सक डा. अक्षय नायर शनिबार तीन साताअघि कोभिड–१९ को उपचारबाट निको भएका एक २५ वर्षीया महिलाको शल्य चिकित्सकका लागि प्रतीक्षारत थिए ।
मधुमेहका पनि रोगी रहेकी तिनको उपचारमा नाक, कान र घाँटीका पनि विशेषज्ञ अक्षयले काम शुरू गरिसकेका थिए । उनले उनको नाकबाट ट्युब छिराएर अति दुर्लभ तर खतरनाक संक्रमित तन्तु म्युकोमाइकोसिस निकाल्न थाले । यस डरलाग्दो संक्रमणले नाक र कान तथा कहिलेकाहिं मष्तिस्कलाई समेत नराम्ररी प्रभावित पार्दछ ।
तर, तीन घन्टा लामो शल्यक्रियाका दौरानमा आखिर त्यस संक्रमणको कारण बिरामीको ज्यान बचाउन डा. अक्षयले उनको एउटा आँखै निकाल्नुप-यो ।
कोभिड–१९ को भयावह दोस्रो संक्रमण लहर फैलिरहेको स्थितिमा भारतमा डाक्टरहरूले निको भइसकेका कोभिड बिरामीहरूमा छालामा संक्रमण हुने अर्थात् ‘ब्ल्याक फन्गस’को आक्रमणको घटना देखिइरहेको बताएका छन् ।
प्रायशः माटो, बोट बिरुवा, मल तथा सडेगरेका फलफँल र सागसब्जीमा पाइने म्युकोरको संसर्गमा आउँदा म्युकोमाइकोसिस संक्रमण हुने विशेषज्ञहरूको भनाइ छ ।
डा. अक्षयका अनुसार यो माटो, हावा, नाक र स्वस्थ व्यक्तिका म्युकसमा पनि पाइन्छ । यसले मानव नाक, मस्तिष्क र फोक्सोमा आक्रमण गर्न सक्ने र यसको संक्रमण डायबिटिज र नाजुक स्वास्थ्य स्थिति हुने क्यान्सर वा एचआइभी तथा एड्स बिरामीका लागि प्राणघातक साबित हुन सक्ने बताइएको छ ।
डाक्टरहरूका अनुसार यस संक्रमणको कारण औसतमा ५० प्रतिशतको ज्यान जान सक्छ । साथै, तिनीहरूले अत्यन्तै सिकिस्त कोभिड–१९ का बिरामीको ज्यान जोगाउन प्रयोग हुने स्टेरोइडको कारण पनि यो संक्रमण हुनसक्ने अनुमान गरेका छन् । डिसेम्बर र फ्रेब्रुअरीबीच भारतका पाँचवटा शहर मुम्बई, बैंग्लोर, हैदरावाद, दिल्ली र पुणेमा यस्ता ५८ वटा घटना देखिएको बताइएको छ । पीडितमध्ये कोभिड–१९ बाट निको भएको १२ देखि १५ दिनभित्र अधिकांशमा यस्तो समस्या देखिएको छ ।
प्रदेश १ मा ६ सय ९३ जनामा कोरोना सङ्क्रमण
सिराहा पनि उक्लियो रेड जोनमा
उपत्यकामा २ हजार ९४० जनामा सङ्क्रमण